လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်က မင်းကို ပို့လိုက်တာ အီးမေးလ်က သင်တစ်နာရီအတွင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်. အီးမေးလ်တွင် အရေးကြီးသော ပရောဂျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် သင်တင်ပြလိုသည့် သော့အချက်အလက်များပါရှိရမည်။
အဆိုပါကုန်တိုက်ဒါညံ့ဖျင်းတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားသင်လိုအပ်သောဒေတာများကိုမတှေ့နိုငျကွောငျး: ဒါပေမယ့်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ စာလုံးပေါင်းအမှားနှင့်မပြည့်စုံစာကြောင်းများရှိပါသည်။ အပိုဒ်အလိုရှိသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေအဖြစ်လိုအပ်သောအချိန်အများကြီးသကဲ့သို့ရှည်လျားသင်သည်သုံးကြိမ်အဘို့ဤမျှလောက်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ရလဒ်အဖြစ်သင်အစည်းအဝေးအတွက်ပြင်ဆင်ထား-အောက်မှာကအဖြစ်ကောင်းစွာသင်မျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ်အဖြစ်နေရာတစ်နေရာယူတော်မမူကြောင်းဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသလော သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပိတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, တက, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစုံစုံနှင့်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ပြည်သူ့စာအုပ်၏အရှည်ပေါ်အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုဖို့အချိန်မရှိဘူး, သူတို့ကညံ့ဖျင်းဆောက်လုပ်ထားဘယ်မှာရှိသနည်းဟုသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အီးမေးလ်များကိုနေရာတိုင်းကွဲပြားလျက်ရှိသောကိုဖတ်ရှုဖို့သည်းခံခြင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
ပိုပြီးသင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုရေးသားခြင်း ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်း, သင်န်းကျင်ရှိသူများအပေါ်စေမည်ထင်မြင်သင့်ရဲ့သူဌေး, သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်သင့် client များအပါအဝင်ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်ဤကောင်းသောဆွဲဆောင်မှုကိုသင်ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဝေးကိုသိရတာပါ။
စာအရေးအသားကိုရှင်းလင်းဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းသင့်လျော်သော format ကိုရွေးချယ်ဖို့ပါပဲ။ သင်တစ်ဦးအလွတ်သဘောအီးမေးလ်ကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါသလား? အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာရေးပါ? တစ်ခုသို့မဟုတ်တရားဝင်စာတစ်စောင်ရေးလိုက်?
ဒီပုံစံကပရိသတ်အတွက်ရောသင်၏စာအရေးအသားကိုပါသတ်မှတ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်တစ် ဦး ထံအီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးနေလျှင်၎င်းသည်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ထံအီးမေးလ်နှင့်တူညီသည်လား။
သင်၏စာကိုမည်သူဖတ်မည်ကိုဖော်ထုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အကြီးတန်းမန်နေဂျာများ၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲတစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောအုပ်စုငယ်တစ်ခုကိုရည်ရွယ်သလား။ သင်ရေးသားသမျှတွင်သင်၏စာဖတ်သူများ (သို့) စာလက်ခံသူများသည်သင်၏အသံနှင့်အကြောင်းအရာ၏အသွင်အပြင်များကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။
တစ်ဦးကစင်ကြယ်သော, အဖြူရောင်ကွန်ပျူတာ screen ကိုမကြာခဏခြိမ်းခြောက်နေသည်။ သငျသညျကိုစတငျဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဖမ်းရရန်လွယ်ကူသည်။ ဤအကြံပြုချက်များသည်သင်၏စာရွက်စာတမ်း compose နဲ့ format ဖို့ကြိုးစားပါ:
သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူ Start: သင်၏စာဖတ်သူများသင်သည်ထိုသူတို့ကိုပြောပြရာ၏ဘာမျှမသိနိုငျကွောငျးကိုသတိရပါ။ သူတို့ပထမဦးဆုံးသိထားဖို့လိုအဘယ်သို့နည်း,
အစီအစဉ်တစ်ခု Create: သင်ထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာ, တစ်ဦးတင်ပြချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်မိန့်ခွန်းအဖြစ်တစ်ဦးမဟုတ်တော့စာရွက်စာတမ်းရေးသားခြင်းလျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ ကောက်ကြောင်းသငျသညျအဘယျသို့အမိန့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲသတင်းအချက်အလက်သို့ task ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
အနည်းငယ်စာနာကြိုးစားပါ: သင်အလားအလာဖောက်သည်တစ်ဦးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအီးမေးလ်ရေးလျှင်ဥပမာ, အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သင့်အရောင်းအစေးဂရုစိုက်သင့်သလဲ သူတို့အဘို့အားသာချက်ကဘာလဲ? ခပ်သိမ်းသောကာလသငျ့ပရိသတျ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သတိရပါ။
အဆိုပါလိုသောတြိဂံကိုသုံးပါသငျသညျအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုစည်းရုံးဖို့ကြိုးစားပါလျှင်, အဘယ်ကြောင့်လူများ, သငျသညျနားမထောငျစိတ်ဝင်စားသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုရန်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရှောက်သွားနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ကိုက်ညီထုံးစံ၌သတင်းအချက်အလက်များတင်ပြသင့်တယ်ရှင်းပြဖို့သေချာပါစေ။
သင့်ရဲ့အဓိကဆောင်ပုဒ်ကိုဖေါ်ထုတ်သင်သည်သင်၏သတင်းစကား၏အဓိကဘာသာရပ်သတ်မှတ်ပေးရန်အခက်အခဲရှိပါကသင်ဆဲ 15 စက္ကန့်သင့်ရဲ့အနေအထားကိုရှင်းပြရန်ဟန်ဆောင်။ သငျသညျအဘယျသို့ဆိုသညျကား, ဒါကဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့အဓိကဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားသုံးပါ: တစ်သိပ္ပံနည်းကျဆောင်းပါးရေးသားခြင်း၏က Short, ကရိုးရှင်းပြီး, တိုက်ရိုက်ဘာသာစကားသုံးစွဲဖို့များသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကိုယ့်လူမျိုးကိုအထင်ကြီးဖို့ရှည်လျားသောစကားလုံးများကိုမသုံးပါနဲ့။
သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတတ်နိုင်သမျှဖော်ရွေဖြစ်သင့်သည်။ စာသားမခွဲခြားရန်တတ်နိုင်သမျှခေါင်းစဉ်, ထပ်ဆင့်ခေါင်းစီး, ကျည်ဆံများနှင့်နံပါတ်များကိုသုံးပါ။
ပြီးနောက်ရှိသမျှသည်ရှည်လျားအပိုဒ်သို့မဟုတ်ပုဒ်မ headers နှင့်ကျည်ဆံအချက်များနှင့်အတူတိုတောင်းသောအပိုဒ်သို့ခွဲခြားစာမျက်နှာနှင့်ပြည့်စုံစာမျက်နှာကိုဖတ်ရှုဖို့ပိုမိုလွယ်ကူဘာလဲ scan ဖတ်ခံရဖို့လွယ်ကူသောစာရွက်စာတမ်းပိုပြီးမကြာခဏရှည်လျားသိပ်သည်းအပိုဒ်နဲ့စာရွက်စာတမ်းထက်ကိုဖတ်လိမ့်မည်။
ဖတ်ရန် တစ်ဦးနှောင့်နှေးတရားမျှတအီးမေးလ် template ကို
အဆိုပါခေါင်းစီးစာဖတ်သူရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သင့်ပါတယ်။ မေးခွန်းများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်စပ်စုစာဖတ်သူကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကူညီဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးခွန်းများကိုအသုံးပြုခြင်း, အထူးသဖြင့်ကြော်ငြာမိတ္တူအတွက်မကြာခဏအကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
ဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းခြင်းလည်းသင်၏စာသားခွဲခြားရန်လိမ္မာပါးနပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအမြင်အာရုံအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုစာဖတ်သူအကြောင်းအရာအပေါ်သူ၏အာရုံကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်ပြု, ဒါပေမယ့်လည်းစာသားမထက်အများကြီးပိုမြန်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များဆကျသှယျဖို့သာ။
ငါသည်သင်တို့ကိုပို့ / / မေးလ်ပေးပို့
အဆိုပါကြိယာကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းတစ်ဦး "e", အတူ "ငါသည်ပေးပို့" အနည်းကိန်းကိုပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ရေး, ပထမဦးဆုံးအုပ်စုထဲမှာတစ်ဦးကြိယာအဖြစ် "ပို့ပေးပါ" ။ နာမ် ( "တစ်တင်ပို့") သည်နှင့်အများကိန်းဖြစ်နိုင်သည် "e", မပါဘဲ "Send": "ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံ" ။
ငါသည်သင်တို့တံဆိပ်ခတ်ထားလော့ / သင်သည် join
ကျနော်တို့ကအမြဲတစ်ဦး "s" နှင့်အတူ "ငါသည်သင်တို့ကို join" ရေးပါ။ တစ်ဦး "t" နဲ့ "ပူးတွဲ" အနည်းကိန်းတတိယလူတစ်ဦး၏ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကထပ်ပြောသည်။ "
နောက်ဆုံးနေ့ / နေ့စွဲ butoire
အမျိုးသမီးအမည်ဖြင့်မှ affixed ဖြစ်ပါတယ် "ဖြတ်" ဖြစ်သော်လည်း, သွေးဆောင်မှုအတွက်ပေးနဲ့အမြဲ "e", မပါဘဲ "ဖြတ်" ကိုရေးသားကြပါဘူး။
ထောက်ခံချက် / ထောက်ခံစာ
အင်္ဂလိပ်ပွငျသစျထဲတွင်တစ်ခု "e", အတူတိကျမ်းစာ၌လာသည် "ထောက်ခံချက်" အကယ်. အမြဲတစ်ဦးက "" နဲ့ရေးထားလျက်ရှိ၏ "ထောက်ခံချက်" ဖြစ်ပါတယ်။
သူ / သူ / က-ရှိပါတယ်-သူဖြစ်ပါတယ်
အသံထွက်လွယ်ကူစေရန်နှင့်သရအက္ခရာနှစ်ခုဆက်တိုက်ကာကွယ်ရန် euphonic“ t” ကို interrogative formulaes တွင်ထည့်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် "ရှိသေးသည်" ကိုရေးလိမ့်မည်။
၏စည်းကမ်းချက်များ၌ / ၏စည်းကမ်းချက်များ၌
သင်တစ်ဦး "s" မပါဘဲ "၏စည်းကမ်းချက်များ၌" ကျမ်းစာ၌ရေးထားဘူး။ ဒီအသုံးအနှုန်း၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုထိရောက်သော "စည်းကမ်းချက်များကို" အစဉ်အမြဲရှိပါသည်။
တစ်ခု "s" ကအဆုံးသတ် " မှလွဲ. " ဟုအဆိုပါစကားလုံးအားဖြင့်လမ်းလွဲခံရဖို့မသတိထားပါ။ သင်တစ်ဦး "s" နှင့်အတူ "အကြား" ကျမ်းစာ၌ရေးထားဘူး။ ဒါကဝိဘတ်သည်နှင့်လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုဖြစ်ပါတယ်။
သဘောတူညီခဲ့သည့်အတိုင်း / အဖြစ်သဘောတူညီခဲ့
အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်နှင့် "e", ကြာတော့မှ "သဘောတူညီခဲ့အဖြစ်" တောင်မှတစ်ဣတ္နာမတော် affixed ။
ကို Maintenance / ထိန်းသိမ်းထား
ကျနော်တို့နာမ်နှင့်ကြိယာရှုပ်ထွေးမပြုရပါ။ "t" မပါဘဲအမည် "ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု" တခုလဲလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ် "အလုပ်အင်တာဗျူး" ဖော်ပြသည်။ အနည်းကိန်းတတိယလူတစ်ဦးအတွက်ကြိယာကတစ်ခုခုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အရေးယူမှုမှကြွလာသောအခါအသုံးပြုသည် "ထိန်းသိမ်းထား" ။
သင့်ရဲ့စာဖတ်သူတွေထဲကတချို့ဟာစုံလင်သောစာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သငျသညျသူတို့အားအမှားတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကသတိထားမိမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုဆင်ခြေအဖြစ်မသုံးကြဘူး: သတိထားမိပါလိမ့်မယ်သူကိုအထူးသဖြင့်များသောအားဖြင့်လူများ, အကြီးတန်းမန်နေဂျာ, အဲဒီမှာလိမ့်မည်!
ကောင်းသော proofreading ၏ရန်သူမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အီးမေးလ် browse ဖို့အလျင်စလိုဒါပေမယ့်သင်ကအမှားတွေလက်လွတ်ဘယ်လိုပါပဲ။ သငျသညျရေးထားပြီအဘယ်အရာကိုစစျဆေးဖို့ကဤညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ:
သင့်ရဲ့ headers နှင့် Footer Check: ပြည်သူ့မကြာခဏစာသားအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ဖို့သူတို့ကိုလျစ်လျူရှု။ အဆိုပါခေါင်းစီးသူတို့အမှားအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းကြီးတွေနဲ့အဆီကြောင့်ဤသည်မဟုတ်ပါ!
အီးမေးလ်ကျယ်လောင်စွာ Read: ဒီသငျသညျအမှားများကို detect လုပ်ဖို့ကပိုများပါတယ်ဆိုလိုတာကပိုမိုနှေးကွေးစွာသွားရရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။
သင်၏စာသားရဲ့အဆုံးမှာ Start: Re-ကိုဖတ်ပြီးအဆုံးကနေအစအဦးမှတစ်ဦးဝါကျတစ်ခုကိုသင်ကအကြောင်းအရာအပေါ်မှားယွင်းမှုများနှင့်မအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကူညီပေးသည်။
အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် မေလ 10th, 2020Tranquillus